Farshaxan yaqaan aan la aqoon ayaa soo bandhigaya shaqooyinkan mugdiga ah | Abuurista khadka tooska ah
Habka dhiiri galinta si uu daawadaha uga soo qabto fanaan aan la garanayn
Taasi waxaan ugu dhowaan karnaa sawirada qof waxaa si qarsoodi ah loogu soo bandhigaa shabakadda shabakadaha si loo helo farshaxankiisa oo qaabeeya dhinacyada mugdiga ah ee aadanaha ama kuwa shucuurta shucuurta leh ee qaybo nolosha ka mid ah waa inaan ku dhex marnaa iyaga, waa wax laftiisa laftiisa xasaasiyad iyo soo jiidasho leh, ugu yaraan habka fahamkayga waxyaabaha.
Taasi waa sababta aan ula imaado fannaankan oo aan la garanayn magac aan na tusno shuqulladiisii ​​mugdiga ahaa in dhoola cadeyntaas gadaasheeda mugdi weyn laga heli karo ama muuqaalkaas sare ee is aqbalaada qofku ku quusin karo waxa noqon doona niyad jab soo food leh. Farshaxan si qarsoodi ah u baaraya marinnadaas mugdiga ah ee nafta, fikirka aadanaha iyo shucuurta.
Waxaan u baranay inaan kuxirno quruxda farshaxan weyn, laakiin waxaan dib u milicsaneynaa halyeeyo waa weyn, waxaan leenahay Francisco Goya in uu lahaa da 'weyn oo madow oo uu kaliya ku sawiray, qaab astaan ​​ah, waxa ku hareeraysan nolosha.
Qaylada Munch, sida a nasasho iyo niyad jab, taas oo noo horseedaysa waali ama garasho la’aan. Waxaan u dhowaan karnaa farshaxanyahankan halka ilaha uu ka soo jeedo ay ugu adeegeen fiidiyowyada Geiger iyo Tool iyo sida uu u dareemay inay ku xanniban yihiin mugdiga iyo habka qabow ee cabsida iyo soo jiidashada dhagaystayaasha, waana wax ku dhaca taxanahaas sawirada mugdiga ah ee aan wadaagno. khadadkaas.
Maaddaama aan jeclaan lahaa inaan ku siiyo xiriir shaqadaada ah, Imgur ka xidhiidhkaniyo halkan mid kale. Hal talaabo maskaxda aadanaha iyo iyada oo loo marayo meelaha ugu hooseeya ee mugdiga ah taasi badanaa ma fududa in la muujiyo iyada oo aan wax laga waydiin xaalada maskaxeed ee qofka sawiraya. Sida haddii rinjiyeynta quruxda aysan haysan wax gadaashiisa ka qarsoon, laga yaabee Adduun farxad leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Habka dhiiri galinta si uu daawadaha uga soo qabto fanaan aan la garanayn
PHP 7 ayaa hadda baxay waana cusboonaysiinta ugu weyn sanadaha
Sawir gacmeed qurux badan oo 'Ursa' ah oo uu qoray Daniel Foust